कार Equus (टाटा): निर्माता, मूल्य, समीक्षा
अर्डर सस्तो कार लोकप्रियता Equus प्राप्त गर्न, निर्माता अधिकतम सुविधा को हेरविचार गरे। पहिलो नजर मा, पर्याप्त विजेता को रणनीति। को टाटा Centennial रूपमा चिनिने मिसिन को उत्तर र पूर्व मा। ल्याटिन देखि "घोडा" को रूपमा अनुवाद। को sedans टाटा Equus को लामबद्ध - सबैभन्दा समग्र र महंगा कार।
एक रोचक तथ्य पछि यो कार कार को रिलीज यसको आधारमा सिर्जना गरिएको छ। बाह्य डाटा र कार्यक्षमता केही मतभेद छन्: उदाहरणका लागि, एक 5-लीटर इन्जिन, एक पल्ट र सिट मा एक मालिश यन्त्र।
Equus कार 1999 मा भएको थियो। जबकि टाटा र मित्सुबिशी collaborated सँगै मिसिन को विकास मा त संलग्न छन्। यो नयाँ दक्षिण कोरियाली निर्माता को "चमत्कार" को मुख्य प्रतियोगिहरु को "मर्सिडीज" मोडेल र "बीएमडब्ल्यू" हुनेछ भन्ने घोषणा गरेको थियो। वास्तवमा, यो प्रतियोगिता Ssangyong संग भयो कि बाहिर गरियो।
केवल घरेलू बजार मा बेच पहिलो पालकी मा, विश्व स्तर नछोडी। को कार कम्पनीहरु को उपस्थिति पछि अब साथ प्राप्त गर्दै छन्, र कार दुई नाम पायो - मारुति मर्यादा र टाटा Equus। यी वाहन क्रमशः, जापानी र कोरियाली बजार प्रस्तुत छ। मूल्य प्रति एकाइ 92 लाख वन थियो।
2003 मा टाटा मोटर कम्पनी मोडेल अद्यावधिक छ "मित्सुबिशी" पूर्ण उत्पादन रोक्छ रूपमा।
कार को दोस्रो पुस्ता को पुनर्निर्मित Equus थियो। Wheelbase drive, को इन्जिन विभिन्न सामाग्री को छन्, एक लम्बी आकार छ - पछिल्लो। तर, कोरियाली कम्पनी जनसंख्या पहिले नै Equus उच्च-गुणस्तर, कम लागत मोडेल संग सम्बन्धित छ को रूप मा, काम शीर्षक परिवर्तन भएन।
2009 मा, कार बिक्री चीन को जनता गणतन्त्र मा जान्छ, र एक वर्ष पछि, यो मिसिन को अमेरिका अन्तरराष्ट्रीय स्वतः शो देखिन्छ। 2013 कलिनिन्ग्राद मा आधिकारिक विधानसभा को शुरुवात विशेषता द्वारा गर्न सकिन्छ।
Equus - मूल्य जो3लाख rubles, सुसज्जित 370 अश्वशक्ति को एक इन्जिन छ कार, पनि चिप्लो सडक मा राम्रो maneuverability छ र, पाठ्यक्रम, अत्यन्तै प्राविधिक डाटा छ। वर्तमान स्वचालित प्रसारण। तपाईं एक मिसिन सिर्जना गर्दा यात्री सान्त्वना थप जोड गर्न। एक कार ड्राइभमा - यो एक खुशी छ, र यो मालिकको समीक्षा प्रमाणित गर्छ। मान्छे अक्सर विशाल ट्रंक (यसलाई बरु एक प्लस छ), उहाँले दुवै बाहिर र भित्र खुल्छ भन्ने तथ्यलाई ध्यान।
निर्माता हावा निलम्बन को परिचय को हेरविचार गरे। यसलाई हुर्काउन एक सानो Equus मदत र कठिन ठाउँमा हटाउन हुनेछ। खेल मोड यो पनि सबैभन्दा समीक्षा आधारमा बुझेका गर्न सकिन्छ, धेरै उपयोगी छ।2टन को ठूलो कार धेरै स्थिर हुन अनुमति दिन्छ। यो लागत र3लाख रूसी rubles हुनत, मूल्य एकदम जायज छ। कोरियाली कृति को अभिमुखीकरण एक यात्री (unofficially) रूपमा र सडक नै मा।
हामी कार Equus निकै डिजाइन को मामला मा सविस्तार भन्न सक्दैन। उत्पादकहरु को बारेमा धेरै छैन हेरविचार गर्न र सँगै आफ्नो मोडेल पहिले नै जारी को तत्व राख्न भने त्यहाँ एक भावना हुन सक्छ।
कार आंतरिक राम्रो हो, तर यो यस्तो प्रदर्शन पहिले नै केही वर्ष पहिले भेट छ हुन्छिन्। अर्थात् ट्रिम यसको सौन्दर्य द्वारा प्रतिष्ठित छैन जो, सस्तो प्लास्टिक, कम लागत छाला र काठ समावेश छ। तर सबै कमीकमजोरी सजिलै ह्यान्डलिङ र वाहन सान्त्वना ओभरल्याप छन्।
इन्जिन मोडेल वी-8 प्रतिनिधित्व छ, यसको मात्रा अलिकति4भन्दा बढी लिटर छ। लागि चालक कम इन्धन खर्च गर्न, तर यो थप र थप गति प्राप्त छ क्रममा, निर्माता सबै एल्यूमीनियम निर्माण सुसज्जित गर्न कार Equus हेरविचार गरे। हरेक 100 मी कार 11 लिटर खपत। प्रसारण छ चरणमा छ। केही वर्ष पहिले यस्तै इन्जिन सबै अरूलाई बीच सबै भन्दा राम्रो थियो। निलम्बन पनि एल्यूमीनियम, त्यसैले ह्यान्डलिङ मिसिन उच्चतम स्तर मा छ।
कार टाटा Equus कोरियाई को safest एक गरेको छु। ड्राइभर सडक बाट कम विचलित छ, विशेष दर्पण तथाकथित अन्धो स्थान रोक्न क्रममा छानिए। मिसिन मा स्थापित छ जो कार्यक्रम, सडक र अन्य पार्टी अधिकतम दूरी गणना गर्न, गाडीको अगाडीको शिशा जानकारी पहुंचाता।
नौ airbags, टाउको restraints, सडक चिह्नों, स्थिरता नियन्त्रण गर्न हेर्ने दूरी - यो Equus मोडेल को पूर्ण सेट सबै भाग हो। अंत सित nuance त्यो अर्को लाइन आन्दोलन मा बाँकी छ छैन भनेर ड्राइवर, मेशिन को स्थान नियन्त्रण वा अधिक पुल गर्न अनुमति दिन्छ। आपतकालीन ब्रेक लगान लागि Bumpers र कार्यक्रम पनि यात्रु पनि यदि बेल्ट fastened छैन, सुरक्षित रहन मद्दत गर्नेछ।
वारंटी अवधि (यसलाई5वर्ष रहन्छ) को समयमा पूर्ण सेवा प्राप्त गर्न निःशुल्क छ। पहिलो3वर्ष समयमा, मालिक (यसलाई चोरी गरिएको छ भने) वाहन को स्थान तल ट्र्याक कि सक्नुहुन्छ, साथै एक स्मार्टफोन मा एक विशिष्ट कार्यक्रम मार्फत दृश्य पछिल्लो दर्पण हेर्न विशेष Equus रिमोट सेन्सर प्राप्त गर्दछ।
कार Equus VS 380
शरीर एक क्लासिक आकार छ। कार नै कार्यकारी प्रकार बुझाउँछ। रूप - एक, ठोस चिकना र स्टाइलिश। दुई वर्ष पहिले, पछि यो redesigned बम्पर र जंगला, साथै हेडलाइट्स अर्को फारम संग सार्वजनिक प्रविष्ट जो कार, restyling पासोमा परे।
सैलून ज्यादा देखि ज्यादा, सहज प्रयोग गर्न सजिलो, एक प्रभावशाली उपस्थिति छ। शरीर भाग केही प्यानल एल्यूमीनियम र काठ बनेको छन्। रूस मा, कार Equus VS 380 (देश मा मूल्य 2-3 लाख rubles पुग्छ) दुई संस्करण मा बिक्री गरिन्छ। तिनीहरूले दृश्यहरु र इन्जिन शक्ति फरक। दुवै गति सुधार र यसरी खर्च इन्धन को मात्रा कम जो यस्तो प्रणालीमा सञ्चालन।
सुरक्षाको लागि रूपमा, वाहन9airbags संग सुसज्जित छ। शक पनि सस्तो छैन: तिनीहरूले पालो मा प्रवेश सुविधा, तपाईं विश्वस्त ठाडो ढलान र गरिब गुणस्तर सडक मा ड्राइव गरौं।
कार Equus VS 460
यो मिसिन ड्राइभर र अन्य यात्रु लागि डिजाइन गरिएको छ। सबैभन्दा कार सही पछि बस्छन जो व्यक्ति "भुक्तानी ध्यान"। यो स्थान रक्षा गर्न अभिप्रेरित छ। के रोचक छ मिसिन यो कुर्सी पनि unfastened बेल्ट कुनै पनि तरिकामा प्रतिक्रिया गर्दैन छ।
कुनै दोष नभएको उपस्थिति लागि मोडेल। ग्लास darkened। कार को पछिल्लो र अगाडि धेरै ठोस देखिन्छ गर्दा Equus प्रोफाइल, खेलकुद कार जस्तो। पहिलो नजर मा यो जसको उत्पादन यस मिसिन को के ब्रान्ड र बुझ्न निकै गाह्रो छ। कुनै superfluous विवरण, सख्त फारम: यो क्लासिक उपस्थिति के भन्छन् छ। रंग को संख्या खुसी छैनन् - कार कालो र सेतो को रूप मा प्रस्तुत गरिएको छ। जो Equus समीक्षा लेख्न मान्छे, अक्सर "सुट" को मोडेल रूपमा उल्लेख।
दक्षिण कोरियाली पालकी को एक महत्वपूर्ण drawback, हेर्नुहोस् को खरीददारों, को दर्पण धेरै अनौठो तरिका छन् थियो। उहाँले थियो र कि वा छैन कसैले undercut छैन सही लाइन मा - ड्राइभर निरन्तर वरिपरि हेर्न भइरहेको। बाँकी दर्पण एक बढेको छवि देखाउँछ - तिनीहरूले विरुद्ध माथि जाँदै थिए भने तापनि वास्तवमा, टाढा पर्याप्त टाढा छन् तपाईं, एक एसयूवी र ट्रक को बम्पर देख्न सक्छौं। सही-हात दर्पण - एक साझा अन्य सबै मिसिन जस्तै।
मुख्य प्रतियोगिहरु को एक मोडेल Mersedes,-बेन्ज क्लास एस जर्मन 1950 मा पालकी को पहिलो लाइन प्रदान गर्न सक्षम थिए भएको छ। यो श्रृंखला पनि परिवर्तनीय र coupes समावेश छ। क्षणमा, संसारको पहिले नै 2013 मा प्रकाशित भएको थियो जो प्रमुख लाइन एस-वर्ग, को 6th पुस्ता प्रतिनिधित्व छ। बस एक वर्ष कम्पनी आधिकारिक शाखा गर्न बिक्री र वितरण को एक सय thousandth हासिल गरेको छ। एकाइहरु को लाखौं अन्तिम 40 वर्ष उत्पादन को मात्रा। क्षणमा, यो आंकडा3लाख पुग्छ। कार फ्रान्स, जर्मनी, रूस र मेक्सिकोमा भेला हुन्छन्। कम्पनी, "मर्सिडीज बेन्ज" सबै समय9भन्दा बढी विभिन्न पुरस्कार जित्यो को सही लाइन हुन। तिनीहरूमध्ये "सर्वश्रेष्ठ कार" "नयाँ वर्ष" को रूपमा सम्मान गर्दै, "safest कार" र अरूलाई।
अर्को प्रत्यक्ष प्रतियोगी - बीएमडब्ल्यू7शृंखला। लाइन 1977 मा फिर्ता भएको थियो। मोटर वाहन बजार मा एक नयाँ उत्पादन उत्पादन कम्पनी को लागि5वर्षभन्दा। डिजाइन लामो सोच्न छैन मा, त्यो खेल कूप E24 मोडेल देखि उधारो। पालकी धेरै, बुद्धिमान ठोस र आकर्षक पायो। उहाँलाई फिर्ता देखिन्छ गर्न ट्रंक फराकिलो, विशाल धन्यवाद छ। कार ठूलो आयाम :. 486 X 180 X 143 सेमी यसलाई 2050 किलो वजन छ। इन्जिन शक्ति यस्तो आयाम निकै सानो छ हुनत। अपग्रेड मिसिन गर्दा थपियो-छिडकाव प्रणाली, तर अधिकतम गति र प्रवेग परिवर्तन छैन।
केही देशहरूमा किन देब्रे गर्न यातायात पालन गर्छन्?
"रेनो Megan रुपैया" - भेडा लुगा मा एक ब्वाँसो
यस निर्वात ब्रेक बूस्टर
जो छनोट जलजीवालय फिल्टर लागि सबै भन्दा राम्रो गर्न छ?
माइकोलजी के हो? म्याकोलोजी - मशरूम विज्ञान
बिरामी वा जन्म दिन? विधिहरू दुखाइ सुख मद्दत गर्न
के भित्री VAZ 2106 को ट्यूनिंग सुरु गर्ने संग?
रेस्टुरेन्ट "Chistye Prudy" को ponds मा (सेन्ट पीटर्सबर्ग)। मास्को मा पानी मा "Compote", "आनन्द", "नोस्टाल्जिया" र अन्य रेस्टुरेन्ट
तपाईं प्रतिस्थापन हिप जोइन्टहरूमा, र के परिणाम आवश्यक जब यो सञ्चालन हुन सक्छ?
जैकेट "Konso": समीक्षा, उत्पादन दायरा, ब्रान्ड
बौद्धिक गुण को एक सेट एक व्यक्ति - सामाजिक विज्ञान व्यक्तिमा
इस्टर सजावट। इस्टर लागि घर कसरी सजाउनु गर्न
चुम्बकीय स्टार्टर - जडान गर्न के छ र कसरी